Qubanaha » Yusuf Garaad: Muqdisho iyo Kigali – Shalay iyo Maanta .
Yusuf Garaad: Muqdisho iyo Kigali – Shalay iyo Maanta .
May 8, 2017 - jawaab
In aad aragto askar qoryo sidata oo baareysa baabuurta waddada mareysa ma ahayn wax lala yaabo. Maalinjoog aan u tagnay magaalada quruxda badan ee Gisenyi oo ku baal taalla harada kala qeybisa Rwanda iyo Congo ayaa habeenkii markii aan ku soo laabannay Kigali waxaan nimid magaalada oo ciidan badani uu tuban yahay waddooyinka. Aad ayaana naloo baaray.
Xamar aragtayaaba qori arkeysaa. Garoonka dayaaradaha, fatashka waddooyinka, xafiisyada, hoteellada, baabuurta la carareysa madaxda iyo xataa baabuur askareed oo iskood u socda intuba waxay ka mideysan yihiin AK 47 iyo ama dabajeex waxayna ka mid yihiin nolol maalmeedka Muqdisho.